Madaxweynaha Somaliya oo dalka Sudan ku Sugan sababtu maxey tahay.
Posted by admin on May 05 2011 13:37:11
Khartuum:(hiranstate.com)- Madaxweynaha Somaliya Shariif Shiikh Ahmed oo dowlada Sudan u jooga sidii loo joojin lahaa lacagaha shillin Somaliga ah ee wadankaas lagu daabaco taasi oo uu heshiis dowaldaasi kula galay gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya Shariif Hasan xiligii uu ahaa wasiirka maaliyada.
Khartuum:Madaxweynaha Somaliya oo haatan safar ku jooga dalkaasi Sudan ayaa dadaal ugu jira sidii uu dowlada Sudan uga dhadhicin lahaa in aan dalkooda lacag danbe oo shilin Somali ah lagu daabacin.
Qorshaha dalka Sudan ay lacagta Somaliya dalkeeda loogu daabacayo ayaa waxaa horey ula socday waxne ka ogaa madaxweynaha Somaliya iyo wasiirka boostada, isgaarsiinta warfaafinta, ahna la taliyaha madaxweynaha ninka ugu jagooyinka Badan xukumada Farmaajo C/karim Jamac xiligaasi oo uu xukumadii Cumar C/rashiid ka ahaa wasiirka maaliyada gudoomiyaha barlamaanka Somaliya Shariif Hasan Shiikh Aden.
Dhinaca kale warar hoose oo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in dowladaha IGAD soo dhaweeyeen xiliga ay doorashu dhaceyso oo ku beegan ka hor inta aan la gaarin bisha 8aad iyadoo 22/8/2011 wadanka Somaliya uu la wareegi doono madaxweynahii ay soo doortaan baarlamanka Somaliya.
Urur goboleedka IGAD ayaa noqonaya ururkii ugu danbeyey ee soo dhaweeya doorashada ka dhaceysa dalka Somaliya iyagoo taageray go,aankii baarlamaanka Somaliya, midowga yurub, qeybaha kala duwan ee bulshada oo doonaya in dalka Somaliya noqdo dal xor ah oo ka baxa kumeel gaarka.
Halka maanta ay codsadeen qaar ka mid ah gudiga cadaalada barlamaanka Somaliya in aan wax dhaqaalo ah la siinin xukumada Farmaajo iyo madaxweyne Shariif kedib markii ay sheegeen in uu dalka Somaliya hada ku jiro xiligii ugu musuq maasuqa badnaa ebed. waxeyna si gaar ah uga codsadeen dowladaha Sudan iyo UAE inaysan wax dhaqaalo ah siinin xukumadan ilaa lagu kala baxayo doorashada soo socota.
Magaalada Mogdisho oo ay ka dhaceyso doorashada madaxtinimada Somaliya ayaa waxaa ku sii qulqulaya ganacsato dooneysa iney maalgashi ku sameystaan ka hor inta aan la gaarin doorashada halka mudaneyaal ka tirsan baarlamaanka Somaliya soo jeediyeen in horta la doorto madaxweynaha Somaliya kedibna lagu xijiyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa maadama ay muhiim tahay in horta madaxweynaha Somaliya la dooto kedibna masuuliyiinta kale.
Dhawr bilood ka hor waxey xukumada Farmaajo ku mashquulsaneyd wax doorasho ah lama qabanayo hada waxey howshu mareysaa midkeebaa la soo hormariyaa doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya. inta badan wasiiro ka tirsan xukumada Farmaajo ayaa iyagu ku kalsoon iney doorashadu dhacdo waqtigii loogu talo galay, marka laga reebo tiro yar oo waqooyiga America kala tageen Farmaajo oo iyagu isku dhajinaya meel lagu kala tagi rabo.
Muhiimada doorashadan iyo micnaha ay xambaarsan tahay ayaa ah in aan dowlad danbe oo Somaliya ka hirgasha loogu yeeri doonin TFG waxaana isla maalinka la doorto madaxweynaha cusub loogu yeeri doonaa (Dowlada Somaliya)
Musharaxiintii u taagneyd qabashada jagada madaxweynaha Somaliya ayaa iyagu dadaalkoodii ugu danbeeyey wada iyagoo ololahooda durbaba ka bilaabay gudaha iyo dibada kedib markii ay si rasmi ah maalintii shaleyto aheyd ugu dhawaaqeen gudiyadii qaban qaabinayey doorashada in ay diyaariyeen Kaararkii looga qeyb gali lahaa doorashada ayna dhameeyeen inta badan howlahii loo xilsaaray iyaga doorashaduna dhici doonto waqtigii loogu talo galay.
Arinta ugu xiisaha badan ayaa ah qaar ka tirsan golaha wasiirada xukumada Farmaajo waxey hada bilaabeen olole ay ugu yaraan inta uusan waqtigooda dhamaan iskugu keenayaan beelahooda kedib markii ay xaqiiqsadeen ineysan sii joogi doonin wax ka yar 2 bilood xukumada ay ka tirsan yahiin iyadoo lagu wado iney dalka Somaliya hogaamiyaan wajiyo cusub oo aan aheyn kuwa hada jooga